လက်စွယ်ငုပ်ခြင်း၊ ခြေစွယ်ငုပ်ခြင်း – Healthy Life Journal
Posted on စကျတငျဘာ 16, 2020
—–၊ ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—–
Q. လက်စွယ်ငုပ်ခြင်း၊ ခြေစွယ်ငုပ်ခြင်းအကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။
A. အများအားဖြင့် ခြေစွယ်ငုပ်တာက အဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ လက်သည်းတွေမှာလည်း လက်စွယ်ငုပ်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လက်စွယ်ငုပ်တာနဲ့ ခြေစွယ်ငုပ်တာမျိုး မဖြစ်အောင် လက်သည်းနဲ့ ခြေသည်းတွေ ညှပ်တဲ့အခါ ဘေးအစွန်းကို အသားထဲရောက်အောင် မညှပ်သင့်ပါဘူး။ အဲဒီလိုညှပ်လိုက်ရင် လက်သည်း၊ ခြေသည်း ပြန်ရှည်ထွက်လာတဲ့အခါ အဲဒီလက်သည်း၊ ခြေသည်းက အရေပြားထဲ စိုက်ဝင်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ အနာဖြစ်သွားတယ်..ပြီးရင် Infection (ကူးစက်ပိုး) ရသွားတတ်ပါတယ်။ ပြည်တွေတည်ပြီးဖြစ်တဲ့ ခြေချောင်း၊ လက်ချောင်းကြီးက ရောင်လာမယ်၊ နီလာမယ်.. နည်းနည်းလေး ထိမိတာနဲ့ အတော်နာတတ်ပါတယ်။ တော်တော်လေး ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ လက်စွယ်ငုပ်တာ၊ ခြေစွယ်ငုပ်တာကို အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Paronychia လို့ ခေါ်ပါတယ်။
လက်စွယ်ငုပ်တာနဲ့ ခြေစွယ်ငုပ်တာ အဖြစ်များတဲ့ သူတွေရဲ့ လက်သည်း၊ ခြေသည်းက အများအားဖြင့် ပုံမမှန်ဘဲ ကုပ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုကုပ်နေရင် ခြေစွယ်ငုပ်ဖို့၊ လက်စွယ်ငုပ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများပါတယ်။ လက်သည်း၊ ခြေသည်းက ကုပ်ပြီး လက်စွယ်၊ ခြေစွယ်ပေါ်လာတဲ့အခါ လက်သည်း၊ ခြေသည်းကို ဟိုဖြတ်၊ ဒီဖြတ်လုပ်ရာက Infection ပိုဝင်ပြီး ပြည်တည်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကာကွယ်မှုအနေနဲ့ လက်သည်း၊ ခြေသည်းညှပ်တဲ့အခါ လက်သည်း၊ ခြေသည်းက အပြင်ကို နည်းနည်းထွက်နေပါစေ၊ လက်သည်း၊ ခြေသည်းတွေကို တုံးတိနေအောင် မညှပ်ပါနဲ့၊ လက်သည်း၊ ခြေသည်းအစွန်းကို နည်းနည်းထွက်နေပါစေ။ အရေပြားထဲ ငုပ်မနေပါစေနဲ့လို့ အကြံပေးကြပါတယ်။
“ လက်စွယ်ငုပ်တယ်၊ ခြေစွယ်ငုပ်တယ်၊ ပိုးဝင်ပြီး ပြည်တည်နေလို့ ဖြုတ်ထုတ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုရင် ခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာ ထုံဆေးပေးပြီး ဖြုတ်ထုတ်ပေးရပါတယ်။ ပြီးရင် Infection ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင် သင့်တော်တဲ့ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးကို ပေးရပါတယ်။ ဖြုတ်ထုတ်ပြီးရင်တော့ နာတာက အတော်သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။”
Q. လက်စွယ်ငုပ်ခြင်း၊ ခြေစွယ်ငုပ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုအခြေအနေမှာဆိုရင် ကုသမှုခံယူဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ ဆရာ။
A. တကယ်လို့ လက်စွယ်ငုပ်တာ၊ ခြေစွယ်ငုပ်တာတွေဖြစ်ပြီး အရေပြားက ရောင်လာတယ်.. နီလာတယ်..ပြည်တည်လာတယ်..သိပ်နာလာတယ်ဆိုရင်တော့ ငုပ်နေတဲ့လက်သည်း၊ ခြေသည်းနေရာကို ထုံဆေးပေးပြီး ဖြုတ်ထုတ်ပေးရပါတယ်။ ပြီးရင် ပြည်တွေစင်သွားအောင် လုပ်ပေးရပါတယ်။ အများအားဖြင့် ဒီလိုလုပ်ရုံနဲ့ သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။ တချို့လူနာတွေကျတော့လည်း လက်စွယ်၊ ခြေစွယ်ငုပ်လိုက်၊ ဖြုတ်ထုတ်ပေးလိုက်၊ ပြန်ဖြစ်လိုက်.. ဒီလိုဖြစ်လိုက်၊ ပျောက်လိုက် သံသရာလည်နေတတ်တယ်။ အဲဒီအခါကျရင် လက်သည်း၊ ခြေသည်းက ပြန်ထွက်နေရင် အဆင်မပြေဘူး။ ဖြစ်တဲ့ ခြေသည်း၊ လက်သည်းမှာပဲ ပြန်ပြန်ဖြစ်နေတာမျိုးပါ။ ဒါကြောင့် လက်သည်း၊ ခြေသည်းကို နောက်ထပ် ပြန်မထွက်အောင် Matrix Excision ဆိုတဲ့နည်းနဲ့ ကုပေးရပါတယ်။ လက်သည်း၊ ခြေသည်းထွက်တဲ့ နေရာအရင်းကို Matrix လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီ Matrix ကို အရိုးအထိရောက်အောင် ဖြတ်ထုတ်ရပါတယ်။ ဒီလို ဖြတ်ထုတ်တဲ့အခါမှာ ခြေချောင်းကိုကော့တဲ့ အရွတ်ကိုမထိအောင် သေချာဂရုစိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီအခါ အဲဒီနေရာက အသားမာတက်ပြီး အနာရွတ်လို ဖြစ်သွားပါတယ်။ ခြေသည်း၊ လက်သည်း မရှိတော့ပေမယ့်လည်း ဘာမှ ဒုက္ခမပေးပါဘူး။ ပုံမှန်အတိုင်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ထိရင်လည်း လုံးဝမနာပါဘူး။
Q. လက်စွယ်ငုပ်ခြင်း၊ ခြေစွယ်ငုပ်ခြင်းက ဘယ်လိုလူတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။
A. လက်သည်း၊ ခြေသည်းက ပုံမမှန်ဘဲ ကုပ်နေတဲ့သူတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ လက်စွယ်၊ ခြေစွယ်ငုပ်တာက အဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာလည်း ဖြစ်ပြီး ဆရာတို့ဆီကို မကြာခဏ လာပြကြတဲ့ ပြဿနာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခြေမမှာ အဖြစ်များပြီး ဖြစ်ရင်လည်း အတော်နာပါတယ်။ လက်စွယ်ငုပ်တယ်၊ ခြေစွယ်ငုပ်တယ်၊ ပိုးဝင်ပြီး ပြည်တည်နေလို့ ဖြုတ်ထုတ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုရင် ခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာ ထုံဆေးပေးပြီး ဖြုတ်ထုတ်ပေးရပါတယ်။ ပြီးရင် Infection ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင် သင့်တော်တဲ့ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးကို ပေးရပါတယ်။ ဖြုတ်ထုတ်ပြီးရင်တော့ နာတာက အတော်သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံးဝ အနာကျက်သွားတဲ့ အထိဆိုရင်တော့ နှစ်ပတ်လောက် စောင့်ဖို့လိုပါတယ်။ ခြေစွယ်ငုပ်တာက ရှူးဖိနပ်စီးလို့ ဖြစ်တာမဟုတ်ပေမယ့် ခြေစွယ်ငုပ်နေချိန်မှာ ရှူးဖိနပ်စီးရင်တော့ ပိုနာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခြေစွယ်ငုပ်နေချိန်မှာ ခြေညှပ်ဖိနပ်ကိုပဲ စီးသင့်ပါတယ်။
Related Items:foot, Hand, medical knowledge
အိမ်ထောင်သက်ကြာတဲ့အထိ အိမ်ထောင်မှုသုခ ပြည့်ဝနေစေမယ့် သဘာဝနည်းများ